Inkqubo ye-Stick Welding Intro SMAW (Shielded Metal Arc Welding) ihlala ibizwa ngokuba yi-welding stick. Ngenye yeenkqubo ezithandwayo ze-welding ezisetyenziswayo namhlanje. Ukuthandwa kwayo kungenxa yokuguquguquka kwenkqubo kunye nokulula kunye nexabiso eliphantsi lezixhobo kunye nokusebenza. I-SMAW iqhele thina ...Funda ngokugqithisileyo »
I-electrode zentsimbi ziingcingo zentsimbi ezibhakwe kwityathanga leekhemikhali. Intonga isetyenziselwa ukugcina i-arc ye-welding kunye nokubonelela ngesinyithi sokugcwalisa esifunekayo ukuze ilunga lidityaniswe. Ukutyabeka kukhusela isinyithi ekonakaleni, kuzinzise i-arc, kwaye kuphucule i-weld. Ububanzi becingo, ngaphantsi ...Funda ngokugqithisileyo »
Izinto ngokubanzi malunga ne-Welding Electrodes I-Tianqiao i-electrode ye-welding yinto efanelekileyo yokukhetha i-electrode iyimfuneko, kwaye kubalulekile ukuba i-welder kunye nabasebenzi abachaphazelekayo bayazi ukuba basebenzise uhlobo olunjani kwimisebenzi eyahlukeneyo. Yintoni i-wel ...Funda ngokugqithisileyo »